အီးယူမှ မြန်မာ့ဆန် လုံးရှည်ကို အခွန်ပြန်လည် ကောက်ခံသည့် ကာလအတွင်း အလားအလာရှိသည့် အခြားစေ?? - Yangon Media Group
အီးယူမှ မြန်မာ့ဆန် လုံးရှည်ကို အခွန်ပြန်လည် ကောက်ခံသည့် ကာလအတွင်း အလားအလာရှိသည့် အခြားစေ??
အီးယူမှ မြန်မာ့ဆန်လုံးရှည်ကို အခွန်ပြန်လည် ကောက်ခံသည့်ကာလအတွင်း အလားအလာရှိသည့် အခြားဈေးကွက်သစ်များ ရှာဖွေသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့ကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးအောင်စိုးက ပြောသည်။ ဥရောပသမဂ္ဂ(အီးယူ)အတွင်း ဆန်စပါးစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်လျက်ရှိသော အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအချို့၏ ကန့်ကွက်မှုကြောင့် အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကို ဆန်းစစ်သုံးသပ်ကာ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ကမ္ဘောဒီးယား နိုင်ငံတို့မှရရှိထားသော အကောက်ခွန် သက်သာခွင့်အထူးအခွင့်အရေး (GSP) ကို သုံးနှစ်ခန့်ယာယီရပ်ဆိုင်း၍ ဇန်နဝါ ရီ ၁၈ ရက်မှစတင် အခွန်ပြန်လည် ကောက်ခံရန် ဥရောပသမဂ္ဂကော်မရှင်က ဇန်နဝါရီလ ၁၆ ရက်နေ့ ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ် ရေးဝန်ကြီးဌာန မြန်မာကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးအောင်စိုးက ”လက်ရှိသူတို့ရဲ့ အခွန် ကတော်တော်မြင့်တဲ့အတွက် လတ်တ လောတော့ ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ အီးယူကဒီလိုအခွန်ကောက်မယ့်အချိန်မှာ အခြား ဈေးကွက်ကိုရှာရမယ်။ ကိုယ့်ဘက်က ထုတ်လုပ်မှုစရိတ်တွေကို လျှော့ချနိုင်မယ်ဆိုရင် အီးယူဈေးကွက်ကို ပြန်ပို့နိုင်မှာပါ”ဟု ဇန်နဝါရီ ၁၈ ရက်က ရန်ကုန် မြို့ရှိ Park Royal Hotel ၌ ကျင်းပသည့် မြန်မာ့ဆန်စပါးက ပို့ကုန်မြှင့်တင်ရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြောသည်။ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ ဘင်္ဂလား ဒေ့ရ်ှနှင့်အာဖရိကနိုင်ငံများတွင် ဈေးကွက် သစ်များချဲ့ထွင်ခြင်း၊ အလားအလာရှိ သော ဝယ်ယူသူများကို ရှာဖွေခြင်းများ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ဆန်စပါးအသင်းချုပ်မှ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးရဲမင်း အောင်က ”အခွန်ပြန်ကောက်တယ်ဆိုတာ လုံးဝဈေးကွက်ပိတ်သွားတာ မဟုတ်ဘူး။ အခွန်ပေးပြီးရောင်းတယ်။သူများနိုင်ငံတွေကလည်း အခွန်ပေးပြီး တော့ ရောင်းနေတယ်။ ဥပမာ-ထိုင်း၊ ဗီယက်နမ်တို့ဆိုရင်လည်း အခွန်နဲ့သွား နေတာဆိုတော့ အဲဒီနေရာမှာယှဉ်ပြိုင် နိုင်အောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင် ဈေးကွက်ကဆုံးရှုံးမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါတွေကို ပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်”ဟု ပြောသည်။ ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံများသို့ မြန်မာနိုင်ငံမှတစ်နှစ်လျှင် ဆန်ရှည်တန်ချိန်တစ်သိန်းနီးပါးနှင့် ပေါင်းဆန်တန်ချိန် ငါးသောင်းခန့်တင်ပို့မှုရှိရာ ယင်းသို့ အခွန်ကောက်ခံမှုကြောင့် ဆန်တန်ချိန် တစ်သိန်းခွဲခန့် ဈေးကွက်ဆုံးရှုံးမှုရှိနိုင် ကြောင်း သိရသည်။
ပျော်ဘွယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးအမတ်ကို နိုင်ငံတော်အကြည်ညိုပျက်စေမှု ပုဒ်မ-၅ဝ၅(ခ)ဖြင့် တရားစွဲ
ပလတ်စတစ် ထိုင်ခုံနှစ်လုံး လက်ခံယူခဲ့သည့် ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် လဝက ဦးစီးမှူးကို ဒေသပြောင်??
ရခိုင်ပြည်နယ် လုံခြုံရေးပိုင်းကို ဦးစားပေးဆောင်ရွက်နေဟု ဝန်ကြီးချုပ် ဆို